कसरी तपाइँको ब्रान्ड र लोगो र Choose्ग छनौट गर्ने - Print Peppermint
तपाइँको ब्रान्ड र लोगो र Col्ग कसरी छनौट गर्ने
डिसेम्बर 23, 2019 | ब्रान्डिङ, रंग, लोगो डिजाइन
सँगै रचनात्मक डिजाइनको साथ, तपाईले आफ्नो ब्रांडलाई छनौट गर्नुभएको र्गहरूले तपाईको ग्राहकलाई देख्न मिल्छ। ती रंगहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो लोगो डिजाइन गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंको वेबसाइट निर्माण गर्न, तपाईंको मार्केटिंग कोलटेरल डिजाइन गर्नुहोस्, र हुनसक्छ तपाईंको ईट्टा र मोर्टार स्थान सजावट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्रान्ड र Color्ग छनौट अब पहिले भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ
तपाईंको ग्राहकको धेरै जसो तपाईं मा पहिलो छाप पहिलो अनलाइन हुनेछ, सही रंग छनौट अब पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको मिशन स्टेटमेन्ट, टोन, र फ्रेसेजिsing महत्त्वपूर्ण छ — तर तपाईंको भिजुअल मेसेजिंग शब्द भन्दा ठूलो स्वरमा बोल्छ। व्यक्तिमा पनि, तपाईंको लोगोको रंग, साइनेज, इन-स्टोर पीओपी, र ब्रान्डेड सामग्रीले तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रियालाई हटाउँदछ। सँगै, तिनीहरू कनेक्ट र तपाइँको दर्शकहरु संग संलग्न र तपाइँको व्यक्तित्व र व्यावसायिकता व्यक्त हुनेछ।
हाम्रो मनपर्ने रors्गको अर्थ
सबैभन्दा पहिले, तपाई र color्गको मनोविज्ञान विचार गर्न चाहानुहुन्छ। प्रत्येक र color्ग एक विशिष्ट र अक्सर अवचेतन प्रतिक्रिया elicits, जो केहि कुरा हो जुन तपाईं दिमागमा राख्न चाहानुहुन्छ। हो, एक रंग संयोजन छान्नुहोस् जुन तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छ — तर तपाईंको डेमोग्राफिकलाई दिमागको शीर्षमा राख्नुहोस्। तल तपाईंको सब भन्दा र color्ग रोजाईहरूसँग सम्बन्धित सबैभन्दा सामान्य भावनाहरू छन्।
लाल- रातो दोस्रो दोस्रो सबैभन्दा सामान्य लोगो लोगो उत्साह, जोश, र उच्च ऊर्जाको साथ सम्बन्धित छ।
सुन्तलाWarm एक न्यानो र आमन्त्रित रंग खाद्य उद्योग मा रचनात्मक ब्रान्ड वा ब्रान्डको लागि उत्तम।
पहेलोWarm एक न्यानो र घमाई र color जुन तत्काल सकारात्मक भावनाहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ।
ग्रीनReenग्रीन ब्रान्डि inमा विकास वा प्रकृतिमा एक जडान प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ब्लू- सबै भन्दा लोकप्रिय लोगो र color्ग को रूप मा यो विश्वास, शान्त, र स्थिरता को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बैजनीColorए रंग र उच्च गुणवत्ताको ब्रांडका लागि उत्तम लक्जरीसँग सम्बन्धित छ।
गुलाबीह्युमा निर्भर गर्दै, जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं, जुन प्रायः रोमान्स र स्त्रीत्वको साथ सम्बन्धित छ। गुलाबी पनि युवा वा ऊर्जावान हुन सक्छ।
ब्राउनWarm एक न्यानो रंग अक्सर मर्दाना ब्रान्डको लागि निर्भरता, सरलता, र प्रकृति प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग।
कालेयो दिमागमा आउने पहिलो र be नहुन सक्छ तर जब सही डिजाइन गरिएको हुन्छ यो कलात्मक ढ ed्गले, वा ठाडो र परिष्कृत हुन सक्छ।
ह्वाइटएक कन्ट्रास्टि or्ग वा माध्यमिक रंग सेतो ताजा र स्वच्छ तटस्थ छ।
ग्रे—Grey ले तपाईंलाई क्लासिकदेखि परिपक्व वा रहस्यमय बनाउन विभिन्न प्रकारका भावनाहरू व्यक्त गर्न मद्दत गर्दछ।
प्राथमिक रंगहरू पछाडि - र—्ग टर्मिनोलजी
तल केहि सर्तहरू र उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई आफ्नो ब्रान्डको र choose्ग छनौट गर्न मद्दत गर्दछ, साथै तिनीहरूको डिजाइनरसँग छलफल गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो लोगो र ब्रान्डि materials सामग्रीमा काम सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ।
र Color्ग पाel्ग्रा
एउटा र wheel्ग पा wheel्गमा १२ कुञ्जी र colorsहरू समावेश हुन्छन् जुन हामी बच्चाको रूपमा सिक्छौं। रहरू एक सर्कलमा छेउछाउमा चित्रित छन्, यसले तपाईंलाई कन्ट्रास्टि and्ग र पूरक रंगहरू चयन गर्न मद्दत गर्दछ। सजावट गर्दा, पा wheel्ग्राहरूका र colors्गहरूले सकारात्मक कन्ट्रास्ट सिर्जना गर्दछ, तर तपाईंको लोगो डिजाईन गर्दा तपाईले रंगहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन पा wheel्गलमा नजिकै छन्। तपाईं कुन र choose्ग छनौट गर्नुहुन्न, कालो र सेतो सँधै माध्यमिक वा उच्चारण रंगहरूको रूपमा कार्य गर्दछ। र base्ग पा wheel्ग तपाईंको आधार सुरूवात बिन्दु सिर्जना गर्न एक उत्कृष्ट उपकरण हो। केहि डिजाइनरहरू तपाईले काम गर्नु भएको छ रंगमा १२ रंगलाई ह्युको रूपमा सन्दर्भ गर्न सक्दछन्।
र Color्ग टिन्ट
र color्ग टिन्ट भनेको यसलाई भनिन्छ जब र color्ग पा wheel्ग्रे रंग सेतो, हल्का बनाउँदछ वा यसलाई उज्यालो बनाउँदछ। यो र wheel्ग पा wheel्गमा मानौं गुलाबी र पेस्टल गुलाबी बीचको भिन्नता हुनेछ।
हामी सबै प्राथमिक रंगको विभिन्न र shad्गहरूसँग परिचित छौं, जस्तै मानक गुलाबी बनाम तातो गुलाबी। डिजाइनको सर्तमा, र color्ग छायाँ हुन्छ जब कालो मिसिन्छ — गाढा गुलाबी सिर्जना गर्दछ जुन रातो तिर अलि सर्छ।
रंग टोन तब हुन्छ जब दुबै सेता र कालो प्राथमिक रंगमा मिसिन्छन्। यसले गुलाबीमा परिणाम दिन सक्छ जुन अलि बैजनी देखिन्छ।
तपाईंको लोगोमा कति रंगहरू हुनुपर्दछ?
औसत लोगोमा २ देखि colors रंग हुन्छ। यसले वा कालो वा सेतोको एक्सेन्ट र color समावेश नगर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, सेतो को आसपास कालो अक्षर फ्रेम र पक्का गर्न शब्दहरु वा डिजाइन तत्वहरु पप छ।
एकल र Color लोगो
एकल-रंग लोगो पर्याप्त यादगार हुन सक्छ। यहाँ सफलता को कुञ्जी छ कि डिजाईन वाह को हुनुपर्छ। केहि लोकप्रिय एकल-र log लोगोमा लक्ष्यको बुल्से र च्यानलको क्लासिक कालो समावेश छ। एकल र color्ग लोगोको बारेमा रमाईलो कुरा भनेको यो हो कि तपाई सजिलै बिदाका लागि र colors्ग, प्रमोशन, वा उत्पाद लेबलका लागि लोगो रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, नाइके लोगो बिभिन्न एकल र in्गमा छापिएको छ र एप्पलको एप्पल कालो, निलो, चाँदी, इन्द्रेणी रंगीन, र विभिन्न रंगहरु को उत्पादनहरु संग फरक छ।
कालो र सेतो शीर्ष मोनोक्रोमेटिक पिक हो जस्तै एडिडास वा व्हाइट हाउस कालो बजार। हो, एडिडासले तिनीहरूको लोगो प्रिन्ट गर्दछ बिभिन्न रंगहरूमा फरक बनाउनको लागि आवश्यक पर्दा। र व्हाइट हाउस ब्ल्याक मार्केटले चीजहरू स्विच गर्दछ जहाँ तिनीहरूको लोगो छापिएको छ, कहिले कालो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षरहरू प्रिन्ट गर्दै। मोनोक्रोमेटिकले कालो वा सेतो जोडेको विरोधाभासी रंगको साथ, वा "शेड्स" लोगो जस्तै वर्तमान ओरेओ लोगो जस्तो नीलो रesको साथ समावेश गर्दछ।
बहु रंगीन लोगो
जबकि धेरै लोगोमा २ देखि colors रंग हुन्छन्, केहि र colors्गको इन्द्रेणी हुन्। बहु-रंग लोगो काम गर्न डिजाईन सफा र कुरकुरा हुनै पर्छ। उदाहरण को लागी, NBC मयूर, ओलम्पिक रिंग्स, वा KIND बार लोगो।
र color्ग पा wheel्ग्रामा एक अर्काको नजिक रors्गहरू समान छन्। यी सामान्यतया २ रंगका लोगोहरू हुन् जस्तै बीपीको पहेंलो र हरियो वा मास्टरकार्डको रातो र सुन्तला। म्याकडोनाल्डको रातो, पहेंलो र सेतोलाई पनि समान मानिनेछ।
तपाईंको अर्को विकल्प भनेको तपाईंको लोगो सिर्जना गर्न रंग र wheel्गको विपरित छेउमा रंगहरू विचार गर्नु हो। यसले रातो र हरियो लोगो समावेश गर्दछ, चिलीको वा माउन्टेन ड्यू जस्ता। ग्याटोराडेको सुन्तला र हरियो अर्को उदाहरण हो।
स्प्लिट-पूरक वा कम्पाउन्ड रंग चयन तब हुन्छ जब तपाईं दुई नजिकको र color्ग पा wheel्ग र takeहरू लिनुहुन्छ, र तिनीहरूलाई रंगको साथ पा pair्गको विपरित छेउमा जोडी गर्नुहोस्। यो--रंग उदाहरणमा फन्टा लोगो समावेश हुन्छ वा मास्टरकार्डले नीलो पृष्ठभूमिमा उनीहरूको सुन्तला र रातो प्रिन्ट गर्दछ।
अन्तिम तर कम्तिमा पनि एउटा ट्राइड लोगोले रंग पहियाको समान दूरीको भागहरूबाट रंगहरू लिन्छ। बर्गर किंग, बेस्ट वेस्टर्न, र टाइड ट्राइड लोगोका सबै उदाहरण हुन्।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ब्रान्ड र लोगो र chooseहरू छनौट गर्नुभयो, यो लोगो डिजाइनर फेला पार्ने समय हो। तपाईंको मार्केटिंग आवश्यक डिजाइन गर्नका साथै, Print Peppermint पूर्ण सेवा लोगो र ब्रान्ड डिजाइन प्रदान गर्दछ। हामी तपाईंलाई तपाईंको स्टार्ट-अप ब्रान्डि asका साथै तपाईंको हालको ब्यापार रिब्रेन्डिंगमा मद्दत गर्न सक्दछौं। अझ बढि जान्नका लागि आज पुग्नुहोस्!
Cards व्यापार कार्डमा हेडशटहरू- एक विस्तृत गाईड
उत्तम उडानहरू तपाईंको फ्लायरहरू वितरण गर्न →